पोखरामा बस्ती बीचबाट जमिन चिरियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
December 30, 2020 AdminLeaveaComment on पोखरामा बस्ती बीचबाट जमिन चिरियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
पोखराका बिभिन्न ठाउंहरुमा जमिन भासिएको हामी सबैले सुन्दै र देख्दै आएका छौ। फेरी पनि पोखरामा जमिन भासिन सुरु भएको छ । पोखराको वार्ड न १५ अमिन्तारामा सेती नदीको नजिकै जमिन भासिएको हो। सुरुमा अलि अलि चर्केको भएपनि अहिले जमिन भासिने क्रम रोकिएको छैन ।
जमिन भासिदै गएपछि त्यहा रहेका स्थानीएहरुलाई वार्ड कार्यालयको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने थप क्षेति हुन् नदिन त्यहा उच्च सतर्कर्ताका साथ मानिसहरुलाई आवात जावात्मा पनि रोक लगाईएको वार्ड न १५ का वार्ड अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले जानकारी दिएका छन । यस क्षेत्रमा जमिन फाटेको छ भने केहि घरहरु पनि चिरिएका छन। यस्तै आदिमा रहेको सेतीको डिलमा पहिरो पनि गएको छ ।
मानिसहरु पहिरोले हुनसक्ने आकलन पनि गरिराखेका छन् । हामीले त्यहाका केहि स्थानीएहरु संग पनि कुरा गरेका थियौ । उहाहरु भन्नुहुन्छ जमिन भासिन थालेपछि सबै जना त्रसित छौ । कोहि भन्नुहुन्छ नाग रिसाएर हो रे १ कोहि भन्नुहुन्छ, जमिन नै कमजोरी भएर हो । नसोचेको ठाउँमा जमिन भासिएपछि धेरै मानिसका धेरै कुरा आउनु स्वभाबिक पनि हो ।
यस्तो छ चर्कीएको भुभाग स्तलगत रिपोर्ट हेर्नुहोस्ः
प्य्राङ्क गर्न गएका यी युवाको भयो रामधुलाई, प्य्राङ्क गरेको भन्दा पनि जंगी बाबाले छोडेनन्, हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल असार १३ गते आईतबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुन २७ तारिख
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’बाट बाहिरिएका करण राईले कोचहरुको बारेमा के भने त ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)